Praiminisitra Ntsay Christian: “Olomangan’ny firenena ny Jly Ratsimandrava” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Olomangan’ny firenena ny Jly Ratsimandrava”
Fanompoam-pivavahana, fametrahana fehezam-boninkazo teo amin’ny tsangambato, fanomezana mari-pankasitrahana ireo mpitandro filaminana nahavita be amin’ny fampandriana fahalemana… Nahatsiarovana ny faha-44 taon’ny nahafatesan’ny filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta, ny Kly Ratsimandrava Richard, ny 11 febroary 1975, teny Ambohijatovo, omaly izany ary notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian.
“Tsy azo kosehina ny tantara ary tsy maintsy tsaroana, satria mitafy ny fanahy maha olona ny vahoaka sy ny mpitondra tonga saina. Mariky ny afom-pitiavan-tanindrazana ny Jly Ratsimandrava”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. Mahatsiaro azy ny firenena, mankasitraka koa satria olomangan’ny firenena izy. Andrasan’ny vahoaka amin’ny mpitondra koa izany.
Tsy fahatsiarovana fotsiny no atao anio, fa fakana lesona amin’ny fitiavan-tanindrazana hahazoantsika manatratra ny fanamby. Mampiombona ny fitiavan-tanindrazana fa tsy mampisaraka. Lesona lehibe napetraky ny Jly Ratsimandrava.
Mila miray hina ny mpitandro filaminana
“Ny lesona lehibe azo tsoahina amin’ny tantaran’ny Jly Ratsimandrava, ny fanatanterahana ny asa amin’ny fo feno fitiavan-tanindrazana ary ny tsy fihemorana manoloana ny ady atrehina: mitraka hatrany na mihatra amin’ny aina aza”, hoy ny minisitry ny Fiarovana, ny Jly Rakotonirina Leon Jean-Richard. Entina maneho firaisankina izany. Satria firaisam-pirenena ny firaisankinan’ny mpitandro filaminana.
Nampahatsiahy ny maha zava-dehibe ny fandraisana andraikitra sy ny fifampitokisana ao anatin’ny firaisankina eo anivon’ny mpitandro filaminana ny minisitry ny Filaminana Anatiny, Rafanomezantsoa Roger. Mitoetra ao am-pon’ny tsirairay avy ny herim-po sy herin-tsaina nananany. Nanamafy ny adidy iantsorohan’ny mpitandro filaminana kosa ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ravalomanana Richard.